सरसफाइको तीन सामान्य बानी, जुन बच्चाका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छ – नेपाली संगसार
सरसफाइको तीन सामान्य बानी, जुन बच्चाका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छ
नेपाली संगसार calendar_today १७ फाल्गुन २०७७, 2:59 pm
सरसफाइको महत्व कोरोना अवधिमा हामी सबैले महसुस गरेकै विषय हो । सरसफाइ कायम गरेर र स्वच्छता अनुसरण गरेर हामी धेरै रोग वा संक्रमणबाट बच्न सक्छौं । जब सरसफाइ एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो, किन बच्चाहरूलाई एउटा सानो उमेरदेखि नै यसको महत्व बताउनु हुँदैन ? हरेक बच्चालाई चेतनाको विकास भएसँगै सरसफाइको बारेमा ज्ञान दिन थाल्नुपर्छ । ताकि उनीहरू पछि गएर सरसफाइको पूर्ण बन्दोबस्त गर्न सकून् ।
कोरोनाले हामी सबैलाई हात धुनुको महत्वका बारेमा ज्ञान दिएको छ । यद्यपि यो महामारीपछि पनि बच्चाहरूलाई तिनीहरूको हात सफा गर्नेबारे पर्याप्त ज्ञान भने दिएको पाइँदैन । तर कोरोनाको बेलामा मात्रै होइन । अरू बेलामा पनि नियमित हात धुने बानीको विकास गर्नुपर्छ । यदि बच्चाहरूले कोरोना महामारीबाहेक अरू समयमा पनि खाना खानुअघि हात धुँदैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा धेरै प्रकारका कीटाणुहरू पेटमा जान सक्छन् । जसले पखालाको जोखिम बढाउँछ । बच्चाहरूलाई साबुन वा ह्यान्डवासले कम्तीमा ३० सेकेन्डसम्म नियमित हात धुन लगाउनुपर्छ । त्यस्तै, पानीले राम्ररी हात धुनुपर्छ ता कि साबुन वा ह्यान्डवासको रासायनिक तत्व हातमा बाँकी नरहोस् । त्यसपछि हातहरू सफा तौलियाले पुछ्नुपर्छ ।
शौच गरेपछिको स्वच्छता
शौच गरिसकेपछि हात धुनु अनिवार्य हुन्छ । जसले हाम्रो हातमा हुने विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरियाहरू मार्न सहयोग गर्ने गर्छ । यसबाहेक पनि खाना खानुअघि खेलेर फर्किएपछि नियमित हात धुने बानी बसाल्नुपर्छ ।
नियमित रूपमा ब्रस गर्ने
छ देखि आठ महिनाको उमेरमा बच्चाहरूको दाँत आउन थाल्छ। यी दाँतहरूलाई दुधे दाँत भनिन्छ, जुन पछि भाँचिएर नयाँ दाँत पलाउँछ । तर यी दूधे दाँतहरूको हेरचाह पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। दिनहुँ उनीहरूलाई दाँत ब्रस गर्न सिकाउनुहोस् । सुरुमा ब्रस औंलाले गर्नुपर्छ । तपाईंको अनुक्रमणिका औंलाले उनीहरूको दाँत र गिजाको मसाज गर्नुहोस्। यसले त्यहाँ रगतको सञ्चार बढाउँछ। जब बच्चाहरू ठूला हुन्छन्, तिनीहरूलाई आफ्नो हातले ब्रस गर्न सिकाउनुहोस् । यसको लागि, सर्वप्रथम उनीहरूलाई माथिल्लो दाँतको बाहिरी भाग र त्यसपछि तल्लो दाँतको बाहिरी भाग सफा गर्न सिकाउनुहोस् । त्यसपछि, शीर्ष र तल्लो दाँतको भित्री भाग सफा गर्न सिकाउनुहोस् । दिनमा दुई मिनेट ब्रस गर्दा बच्चाको मौखिक स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ।
शौचालय सफाइ गर्न सिकाउनु
यदि तपाईंले आफ्नो बच्चालाई शौचालयको सफाइसम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिसक्नुभएको छैन भने शौचालय प्रयोग गरेपछि कसरी फ्लस गर्नुपर्छ भनेर सिकाउन नभुल्नुहोस् । उनीहरूलाई दिसापिसाब पछि स्वयं नुहाउन सिकाउनुपर्छ, विशेषगरी गुप्तांगको सफाइको बारेमा उनीहरूलाई ज्ञान दिनुपर्छ । शौचालय सफाइसँगै शौचालय सफा गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ । ट्वाइलेट पेपरबाट शौचालयको सिट सफा गर्नु, डस्टबिनमा प्रयोग गरिएको टिस्यु राख्नु र त्यसपछि आफ्नो हात साबुन वा हात धुने र खुट्टा सफा गर्ने सही तरिका सिकाउनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
सरकारको नेतृत्व लिने कांग्रेस संकेत
कसरी बनाउने भूकम्प धान्ने बलियो घर ? तपाईंले बुझ्नैपर्ने यी…